Rivers na okwukwe isi iyi | Apg29
Rivers na okwukwe isi iyi
The Bible ihe onwunwe amụma / Mmụọ Nsọ ebubo otú ike anyị obi, "ga" gurgle na ntutu isi na anyị isi-ebili.
N'ihi na mgbe anyị na-eche nke Ogige Ubi nke Iden / Paradise, anyị mara na mgbe Adam na Iv kweghịzi ka nọgide na-ahụ n'ihi na nke ọdịda - ya mere, ọ na-egosi na ha na-chụpụrụ n'ebe ọwụwa anyanwụ, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ogige ahụ.
Ọbụna ọtụtụ Ndị Kraịst, ọbụna na-revival kwere ekwe na-ekwu, doro anya, dị mwute ikwu, Bible pụrụ ịdabere. Ma nke a bụ a mkpọsa na jupụtara okwukwe na Bible dị ka Chineke ezi echiche. N'ihi na a mgbe anyị na-na anya n'ime ụfọdụ nke oké amụma ziri ezi nke Bible, n'ihi na ndị a quantities anapụtakwa mgbe okwukwe na kwa agha ime mmụọ megide ihe ọjọọ ike na na ihu nke-adị kwa ụbọchị multifarious nsogbu, n'ihi ya, ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ m. E nweghị oge ugbu a ida obi ike na Bible. Kama nke ahụ, ọ bụ oge na-a miri emi na ndụ okwukwe. N'ihi gịnị? Ọfọn, ugbu a bụ oge na okwu amụma ọbụna ihe a ga-emezu. Soro odide 1 Gen 2: 10-14 na John 19: 33-34:
"Site Eden, ọ dị ka a osimiri miri n'ogige, na mgbe ahụ na-ekewa ya n'ime anọ na isi alaka. Aha mbụ bụ Pishon. Ọ bụ onye na-aga gburugburu dum ala Havila nile gburugburu, ebe ọla-edo. The gold nke ala ahu di nma: n'ebe ahu ka bdellium na nkume onyx di. Osimiri nke abụọ bụ Gaịhọn. Ọ bụ onye na-aga gburugburu dum ala Etiopia nile buruburu. The atọ osimiri bụ Tigris. Ọ bụ onye na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ Asiria. Osimiri nke anọ bụ Yufretis. "-" Ma mgbe ha wee bịakwute Jizọs ma hụ na ọ nwụọla, ha akụjisịghị ya ụkwụ. Kama n'ịnọgide otu n'ime ndị agha ya ube n'akụkụ, ozugbo e wee ọbara na mmiri. "
Na etiti nke ụwa
Ihe anyị na-agụ banyere ebe a, geographically, si Bible, bụ ebe nke center nke uwa (Olu Ezik 32:12). N'ihi ya na kpere nkịtị Paradise / Eden (Hibru. EDANS ọkụ eletrik. Aden) Eden; sweet n'ihi obi ụtọ park; a mmiri-ọgaranya na-amị mkpụrụ na-enweta ebe. A asụsụ ụdị nke Eden, ednah nke Adan, nke pụtara "iji mee ka ya onwe ya obi ụtọ" na nche, Heb. Gan si Ganan; "Chebe" / "chebe". Olu na ihe odide Hibru nke ndị Song nke Solomon 4:12, nyere translation: "An nchọ ubi bụ nwanne m nwaanyị, m na-alụ ọhụrụ, a na-emechi nke ọma, a kaa akara iyi". Ma jupụta na Hebrew ginnah dị ka Ester 1: 5, 7: 7-8; a nzukọ ebe na-elekọta mmadụ ndụ na uche na ya; "Na ewusiri ike ubi nke diri ndi-eze n'ụlọ." Ebe n'ime Ogige Ubi nke Iden, Chineke na ndị mmụọ ozi ya nwere ha "okwukwe", ma ọ bụ na "agwo ahu bugharịa" tupu Adam na Iv ọdịda si amara, anyị enweghị Bible data. Ma, anyị pụrụ ịhụ na ubi na-abụghị nanị ji "ime mmụọ" ọrụ. Enweghị adianade aru eme mgbe n'ogige e "akọ na chebere." Eden, bụ ma eleghị anya ọ bụghị nanị na center nke uwa a ibu uche, ma ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ na Jerusalem ebekpo - ma ọ bụ ọbụna ihe na a itinye center: na ebe mbụ temple (Solomon) na Jerusalem 900 f. Kr. ozugbo guzoro - na ebe cross nke mgbe Jizọs wuru. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. Ma, anyị pụrụ ịhụ na ubi na-abụghị nanị ji "ime mmụọ" ọrụ. Enweghị adianade aru eme mgbe n'ogige e "akọ na chebere." Eden, bụ ma eleghị anya ọ bụghị nanị na center nke uwa a ibu uche, ma ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ na Jerusalem ebekpo - ma ọ bụ ọbụna ihe na a itinye center: na ebe mbụ temple (Solomon) na Jerusalem 900 f. Kr. ozugbo guzoro - na ebe cross nke mgbe Jizọs wuru. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. Ma, anyị pụrụ ịhụ na ubi na-abụghị nanị ji "ime mmụọ" ọrụ. Enweghị adianade aru eme mgbe n'ogige e "akọ na chebere." Eden, bụ ma eleghị anya ọ bụghị nanị na center nke uwa a ibu uche, ma ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ na Jerusalem ebekpo - ma ọ bụ ọbụna ihe na a itinye center: na ebe mbụ temple (Solomon) na Jerusalem 900 f. Kr. ozugbo guzoro - na ebe cross nke mgbe Jizọs wuru. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. Eden, bụ ma eleghị anya ọ bụghị nanị na center nke uwa a ibu uche, ma ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ na Jerusalem ebekpo - ma ọ bụ ọbụna ihe na a itinye center: na ebe mbụ temple (Solomon) na Jerusalem 900 f. Kr. ozugbo guzoro - na ebe cross nke mgbe Jizọs wuru. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. Eden, bụ ma eleghị anya ọ bụghị nanị na center nke uwa a ibu uche, ma ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ na Jerusalem ebekpo - ma ọ bụ ọbụna ihe na a itinye center: na ebe mbụ temple (Solomon) na Jerusalem 900 f. Kr. ozugbo guzoro - na ebe cross nke mgbe Jizọs wuru. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa. M na-ezo aka na ọnọdụ nke "n'obi nke ala". Nke a bụ ebe mkpọchi etiwapụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka mba ndị ọzọ na ebe. Na ebe ọzọ n'ụwa, uhuruchi na bụkwa oge otú amụma na nke nke Jerusalem. Na mgbe ahụ ifufe nke Jerusalem na ụlọ nsọ oké mkpa.
Ọdachi / ikpe
Anyị kwesịrị iburu n'uche, mgbe anyị na-eche banyere ma na-amụ n'ụwa mgbe na ugbu a, na ọ dịkarịa ala abụọ na isi zuru ụwa ọnụ mgbanwe ọdịdị mbara ala, na Bible ka ihe dị nsọ akụkọ mere n'oge dị iche iche site na ọdachi ma ọ bụ na-eme ihe Chineke kpere n'ikpe.
Olee otú ụwa dị n'okpuru nduzi nke ihe Chineke mere mgbe ọ pụtara ala na-ewu ihe owuwu nke obodo Bebel na ihere / mgbagwoju anya asụsụ nke ndị ahụ, nke mere na ha aghọtaghị onye ọ bụla ọzọ ọzọ (banyere 2,000 BC) - na anyị maara na ihe ọ bụla banyere. Ma, dị ka ọ na-akpọ (1 Exodus 11: 8-9): "Ya mere, Jehova na-agbasa ha si n'ebe n'elu ụwa nile, na ha kwụsịrị iwu obodo. E nyere ya aha Hibru Bebel ( "mgbagwoju anya" / "mgbagwoju anya"), n'ihi na Jehova e ihere asụsụ niile nke ụwa, na n'ebe ọ chụsasịrị ha niile n'elu ụwa. "
Anyị nwere di na nwunye nke ihe atụ ndị ọzọ, ọ na-ele si ebe banyere ebe a, ma na anyị nwere ihe ọ bụla ihe ọmụma nke ihe ha wee pụtara maka Ụwa ọdịdị ala na ndụ. Nke mbụ n'ime ha bụ Onyenwe anyị (banyere 1400 afọ BC) kwụsịrị na anyanwụ na ọnwa mgbe ohu ya Joshua amụma "ekpere" (Joshua 10: 12-13): "N'ụbọchị mgbe Jehova we nye ndi-Amorait na Israel ime ihe ike gwa Joshua Jehova n'iru Israel nile: 'Sol guzo na Gibeon, na ọnwa, na Ajalons ndagwurugwu!' na anyanwụ guzoro, na ọnwa nọrọ, ruo mgbe ndị mmadụ bọọrọ onwe ha ọbọ n'ahụ ndị iro ha. "
Nke abụọ omume nke abụọ "na mbara igwe", ndị na-ada na-ekpebi-spirit uru maka Earth na ya agwa - ezie na ọ gaghị ekwe omume iji mee ka na-egosi na ndị ọkà mmụta sayensị - na-asụ nke na 2 Ndị Eze 20: 8-11 na mere na 6-700 na narị afọ f.Kr. sị: "ma (eze) Hezekaya wee sị (onye amụma) Isaiah'Vad bụ ihe ịrịba ama na Jehova ga-agwọ m, nakwa na m ga-agbago n'ụlọ Jehova? 'Aịzaya said'Detta ga-abụ ihe ịrịba ama sitere n'aka Jehova na Jehova ga-eme ihe o kwuru, sị: uche (oge) ndo (na eze, bú Ehaz si sundial, m dee.) na-eje ije nzọụkwụ iri (h) na-atụ ma ọ bụ ọ ga-aga nzọụkwụ iri (h) azụ? Hezekiah said'Det dị mfe maka onyinyo (oge) na-ojuju nzọụkwụ iri n'ihu. Ọ dịghị, ka ọ kama ije nzọụkwụ iri (h) tillbaka. 'Aịzaya onye amụma tikue Jehova,
Ọfọn, azụ abụọ ọdachi / ikpe-eme ihe, na n'ụwa nile na-arụpụta na ị pụrụ ịhụ metụtara nke ụwa taa.
Nke mbụ bụ "mmiri" nke ndị ezi omume n'oge Noa, banyere 2400 afọ BC (1 Ọpụpụ 7: 17-20, 24, 9: 18-19): "The osimiri bụ n'elu ụwa ụbọchị iri anọ na mmiri ahụ bilie wee welie igbe nke mere na ọ we bilie n'elu ụwa. The mmiri accelerated ma bilie elu n'elu ụwa, ma ụgbọ ahụ floated na mmiri. Na mmiri ẹsuana karia ma n'elu ụwa, na ya ruo mgbe kpuchie nile elu ugwu n'okpuru heaven. Kubit iri na ise (banyere 7.5 mita, a cubit dị ka ochie echiche gbakọọ ogwe aka a dimkpa mmadụ, m dee.) N'elu n'elu rose mmiri, na n'ugwu na-ekpuchi ... Na mmiri guzoro dị elu karịa ụwa na otu narị ụbọchị na iri ise ... ụmụ Noa bụ ndị gara nke ụgbọ (n'Ugwu Ararat, m dee.) bụ Shem, Ham na Jefet. Ham bu nna Kenean. Ndị a atọ bụ ụmụ Noa, ma site na ha onye ọ bụla n'ụwa na-agbasa. "
The abụọ ọdachi ma ọ bụ ihe Chineke kpere n'ikpe-eme ihe, mere mgbe ndị Juu ezinụlọ si na Noa umu-ndikom atọ na-akpọ Shem, nna nna nke ndi-Hibru (ebréerna), bụ ifịk (nakwa banyere 2,000 f.Kr). Na 1 Gen 10: 21-25 ọkọnọ ogbo sị: "Ụmụ nke Shem: Ilam (Persia / Iran nkeji, dee.), Apakshad, Lud, na Eram. Aram umu bụ Ọz, Họl Gita na Mash. Apakshad wee mụọ Iba (ya mere otú ebréer / Hibru, m dee.). N'ihi ya, ọ na-kwuru, sị: "nye Iba amuru ụmụ nwoke abụọ. The otu bụ Peleg (Heb. Ịkekọrịta), n'ihi na n'oge ọ bụ n'ụbọchị ya ka e kewara ụwa. "
1 1 Genesis 1: 19-10 na-egosi na Chineke na-Ya omume nke ihe e kere eke na-akọrọ ndị na mmiri na ala akọrọ, "Chineke said'Vattnet n'okpuru eluigwe, ka achikọta ha n'otù ebe, ka akọrọ na-aghọ synligt. 'Chineke a na-akpọ akọrọ ahu Ala; na mmiri collection ọ na-akpọ oké osimiri nile. Chineke we hu na ọ bụ ihe ọma. "Dị ka Bible, ya mere, e mbụ ọzọ kpọrọ nkụ ebe, ma ala ahu a otu uka na oké osimiri na-anakọtara iche iche. Ma, olee otú nke ahụ square na na anyị na-ihe karịrị otu Afrika na-guru na? Ọfọn, na 1912 sụgharịrị German prọfesọ, Alfred Wegener, na otu mgbe ndidi a 'na-enye' ije ". Si niile mba mbụ eyịride elu, e nwere bụ a eke omume dị ka "gbasaa" ala uka na abụọ kọntinent. Site n'oru nyocha tinyere Atlantic n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ n'ókè-ala-ya, ọ chọtara ezigbo ihe na ịnweta alaeze, osisi alaeze ahụ na ụmụ anụmanụ, na abụọ kọntinent ga ozugbo e sonyeere - na na-adịbeghị anya nnyocha bụghị disproved ozizi nke ihe nile (N'ezie na dị iche iche climates n'ụwa) mbụ na-etinye ọnụ. Onye ọ bụla nwere ike na-amụ ndị a mben na map ụwa, na ịhụ otú ọ ga-ekwe omume ka ha ọnụ, dị ka a mgbaghoju anya, ma ọ bụ dị ka n'ọnụ nke a ọnya etolite kpamkpam. Gịnị ka ọ bụ anyị na-agụ nke Iba, nwa Peleg (Heb. Ịkekọrịta): "Na oge ya ka e kewara ụwa." Mgbe o nkọwa Bible nke 1861 sụgharịta P Fjellstedt odide a, na ụwa dara "ala". Ọ bụ a "disintegration" nke ụwa na style nke otú ndị nkịtị asụsụ n'ihu dara "n'ime iberibe". Onye ọ bụla nwere ike na-amụ ndị a mben na map ụwa, na ịhụ otú ọ ga-ekwe omume ka ha ọnụ, dị ka a mgbaghoju anya, ma ọ bụ dị ka n'ọnụ nke a ọnya etolite kpamkpam. Gịnị ka ọ bụ anyị na-agụ nke Iba, nwa Peleg (Heb. Ịkekọrịta): "Na oge ya ka e kewara ụwa." Mgbe o nkọwa Bible nke 1861 sụgharịta P Fjellstedt odide a, na ụwa dara "ala". Ọ bụ a "disintegration" nke ụwa na style nke otú ndị nkịtị asụsụ n'ihu dara "n'ime iberibe". Onye ọ bụla nwere ike na-amụ ndị a mben na map ụwa, na ịhụ otú ọ ga-ekwe omume ka ha ọnụ, dị ka a mgbaghoju anya, ma ọ bụ dị ka n'ọnụ nke a ọnya etolite kpamkpam. Gịnị ka ọ bụ anyị na-agụ nke Iba, nwa Peleg (Heb. Ịkekọrịta): "Na oge ya ka e kewara ụwa." Mgbe o nkọwa Bible nke 1861 sụgharịta P Fjellstedt odide a, na ụwa dara "ala". Ọ bụ a "disintegration" nke ụwa na style nke otú ndị nkịtị asụsụ n'ihu dara "n'ime iberibe".
Back to odide mbụ ahụ: "Site Eden, ọ dị ka a osimiri mmiri n'ogige-okụre na mgbe kewara n'ime anọ isi alaka." Nke ahụ bụ, na / na etiti nke n'ụwa, ebe nsọ dị na Jeruselem ihe mesịrị, a bịara wuru, e nwere a miri iyi; gbakwuuru ya a oké osimiri. M na-akpọ ya 'osimiri' isi iyi '. Ma i nwere ike ikwu Abụ Ọma 46: 5: "E nwere osimiri ndị na-aga na-enye ọṅụ na obodo nke Chineke, nsọ ebe-obibi nke Onye Kasị Elu."
Ebe ọ bụ na 638 bụ nnukwu Muslim Dome nke Rock na nta Al-Aqsa ụlọ alakụba na akụkọ ihe mere eme "Ugwu Ụlọ Nsọ". Ya mere, ruo Jewish ọkà mmụta ihe ochie na-eme nnyocha adịghị enweta, ọ na-akawanye ọtụtụ ndị okpukpe na ndị ọchịchị ihe na-agaghị eme - ma nke ahụ apụtaghị na ha egwuo ala wee si n'akụkụ, na n'oge a machibidoro iwu "ụmụ". Cheta, na ná mmalite afọ ndị 1970, kwuru na ndị Juu na ndị Western ọkà mmụta ihe ochie na ndị ọkà mmụta sayensị - ha nụrụ mkpọtụ nke mmiri miri emi ala na ụlọ nsọ oge ochie ebe. E nwere okwu taa banyere "obodo n'okpuru obodo" banyere ebe a. The ụzọ Jizọs oge eduga temple - (ie nke abụọ, na-akpọ "Temple nke Zerubabel", mgbe ndị Juu isi 500 BC, na "Temple nke Herod", n'ihi na nke Herọd Onye Ukwu mgbasawanye nke a temple tupu ọmụmụ Kraist) - a chọpụtara na 2004. Ọ bụ mgbe ahụ na oke-elekọta (na ihe ize ndụ nke ndị Al-Aqsa ụlọ alakụba n'elu ga-daa) gwupụtara n'ala na afọ a na-eguzobe na Jerusalem. Ná nraranye nke ụzọ gwara osote onyeisi oche nke ntọala "City of David", Doron Spielman, o wee sị, n'etiti ndị ọzọ.: "Nke a bụ ebe obi nke ndị Juu na ndị na na ọ bụ ọbara na-aga n'ime anyị veins."
ma mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gbochie na ikpeazụ oge na aja bụ kama a ebule / a "scapegoat" onye rapaara na isi / mpi a n'obere ọhịa (1 Exodus 22: 11-14). Nke ahụ ziri ezi!
The Bible ihe onwunwe amụma / Mmụọ Nsọ ebubo otú ike anyị obi, "ga" gurgle na ntutu isi na anyị isi-ebili. N'ihi na mgbe anyị na-eche nke Ogige Ubi nke Iden / Paradise, anyị mara na mgbe Adam na Iv kweghịzi ka nọgide na-ahụ n'ihi na nke ọdịda - ya mere, ọ na-egosi na ha na-chụpụrụ n'ebe ọwụwa anyanwụ, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ogige ahụ. Na mmepụta na ndenye etinye na Jehova Chineke "eldsänglar" nyochaa ụzọ, n'ihi na ikekwe ihe na edere n'ebe ahụ, ọ bụghị nanị na osisi nke ima ezi ihe na ihe ọjọọ, kamakwa "osisi nke ndu". Na dị ka ọ na-ada (1 Gen 3:22): "Onyenwe anyị Chineke said'Se mmadụ adị ka otu n'ime anyị, na-ama ezi ihe na ihe ọjọ. Ugbu a ọ na-eru aka ya na-ewe nakwa osisi nke ndụ, na-eri, na (na mmehie, m dee.) Ma ndụ ebighị ebi. "
Ọ bụrụ na anyị na-now-anyị ka anyị Ezekiel 46 47 ma na-amụ amụma, malite mgbe ahụ, mmezu na-abịanụ ụbọchị, ikekwe banyere oge anyị, ọ dịkarịa ala na-abịa Narị Afọ Iri alaeze Chineke - dị ka ọ na-ekwu na 46: 19-20: " na o ( "angel-nwoke") me ka m'si na ntinye, nke bụ na n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá, n'ime nsọ ime-ulo a họpụtara ndị nchụàjà nke anya n'ebe ugwu, ma m hụrụ na e nwere ebe a anya kwupụta n'ebe ọdịda anyanwụ (ie n'ebe ọdịda anyanwụ , m dee.). O wee sị me'Detta bụ ebe ndị nchụàjà ga-esi anụ àjà ikpe ọmụma ahụ na àjà mmehie na ebe ha ga-eghe ọka àjà nke enweghị iji mezuo ya ka n'ogige dị ná mpụta na otú ahụ eme ka ndị mmadụ heligt. ' "
Ka anyị kwụsị na-eche na ebe na Jerusalem (ochie ebe Eden / Ogige Ubi nke Iden) na-eche banyere ihe Calvary bụ, na nke ịdị elu ya Jizọs tara ahụhụ na ọnwụ ịchụ àjà maka mmehie anyị. Ọfọn, ọ ga-abụ site n'ebe ọwụwa anyanwụ (ubé ndịda ọwụwa anyanwụ) guru - nri site na obodo, na nri site temple a bit edere na. Anyị nwere naanị a "isi ohere" (ọdịda anyanwụ?) Na Eden na ndekọ, ebe ọdịda mere na "osisi nke ima ezi ihe ọjọọ" na ebe "osisi nke ndụ" na-guzo. Mgbe ndị a otú Abraham na Moria isi ebe (a obere ugwu ọdịda anyanwụ n'ime ma wue obodo nke Jerusalem) na-njikere ịchụ Isaac. Tụkwasị na nke a bụ oge na-eme atụmatụ - nnukwu ọrụ ugbo Arunas rere nzọcha-ọka nke Solomon, nke na-ewuli Jerusalem mbụ temple na isi na saịtị (ihe edere), bụ ebe ndị nchụàjà 'kwesịrị obụpde àjà ikpe ọmụma na àjà mmehie. " N'ikpeazụ, na a ngụda, na-ata ahụhụ Jesus cross ọnwụ na Jerusalem "isi ga-eme," Calvary (yiri a-egbu egbu ụbụrụ), a adịghị anya n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke ụlọ nsọ ahụ na obodo. Mgbe nke a, a na-eli of Jesus, a adịghị anya (45 m) n'okpuru lie ke udi, na gosiri ugbu a otú ọ na-ekwu azụ n'Iden, a ubi / Eden ebe. Dị onye Juu na omenala, na Talmud, Adam elìe ebe a, akpan akpan Christian omenala gosi Calvary ugwu na Adam okpokoro isi a n'ili n'okpuru cross. Ma mee ka ọ dị mma si Bible: "N'ebe ahụ akpọgidere Jisus n'obe e nwere ubi, na ubi bụ n'ili ọhụrụ ebe onye ọ bụla ama ma a tọrọ. N'ebe ahụ, ha liri Jizọs, n'ihi na ọ bụ ndị Juu na ụbọchị Nkwadebe, na ílì ahu di nso. "(John 19: 41-42). Mgbe nke a, a na-eli of Jesus, a adịghị anya (45 m) n'okpuru lie ke udi, na gosiri ugbu a otú ọ na-ekwu azụ n'Iden, a ubi / Eden ebe. Dị onye Juu na omenala, na Talmud, Adam elìe ebe a, akpan akpan Christian omenala gosi Calvary ugwu na Adam okpokoro isi a n'ili n'okpuru cross. Ma mee ka ọ dị mma si Bible: "N'ebe ahụ akpọgidere Jisus n'obe e nwere ubi, na ubi bụ n'ili ọhụrụ ebe onye ọ bụla ama ma a tọrọ. N'ebe ahụ, ha liri Jizọs, n'ihi na ọ bụ ndị Juu na ụbọchị Nkwadebe, na ílì ahu di nso. "(John 19: 41-42). Mgbe nke a, a na-eli of Jesus, a adịghị anya (45 m) n'okpuru lie ke udi, na gosiri ugbu a otú ọ na-ekwu azụ n'Iden, a ubi / Eden ebe. Dị onye Juu na omenala, na Talmud, Adam elìe ebe a, akpan akpan Christian omenala gosi Calvary ugwu na Adam okpokoro isi a n'ili n'okpuru cross. Ma mee ka ọ dị mma si Bible: "N'ebe ahụ akpọgidere Jisus n'obe e nwere ubi, na ubi bụ n'ili ọhụrụ ebe onye ọ bụla ama ma a tọrọ. N'ebe ahụ, ha liri Jizọs, n'ihi na ọ bụ ndị Juu na ụbọchị Nkwadebe, na ílì ahu di nso. "(John 19: 41-42). na karịsịa Christian omenala gosi Calvary ugwu na Adam okpokoro isi a n'ili n'okpuru cross. Ma mee ka ọ dị mma si Bible: "N'ebe ahụ akpọgidere Jisus n'obe e nwere ubi, na ubi bụ n'ili ọhụrụ ebe onye ọ bụla ama ma a tọrọ. N'ebe ahụ, ha liri Jizọs, n'ihi na ọ bụ ndị Juu na ụbọchị Nkwadebe, na ílì ahu di nso. "(John 19: 41-42). na karịsịa Christian omenala gosi Calvary ugwu na Adam okpokoro isi a n'ili n'okpuru cross. Ma mee ka ọ dị mma si Bible: "N'ebe ahụ akpọgidere Jisus n'obe e nwere ubi, na ubi bụ n'ili ọhụrụ ebe onye ọ bụla ama ma a tọrọ. N'ebe ahụ, ha liri Jizọs, n'ihi na ọ bụ ndị Juu na ụbọchị Nkwadebe, na ílì ahu di nso. "(John 19: 41-42).
Ọzọkwa, ugbu a Ezekiel 47: 1-2: "Ha we wetara (" angel nwoke ", m dee.) Me azụ ụlọ (temple) n'ọnụ ụzọ, na le miri nēsi n'okpuru (temple) fọrọ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ (kwupụta Gethsemane, n'Ugwu Oliv na Kidron Valley, m dee.), maka ụlọ (temple) n'ihu ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ na mmiri na-asọpụta ala ụlọ (temple) n'ebe ndịda, n'ebe ndịda nke ebe ịchụàjà. O wee kpọbata m n'ọnụ ụzọ ámá dị n'ebe ugwu na-edu m ụzọ na-enweghị ná mpụta ọnụ ụzọ ámá, nke nēche n'ebe ọwụwa anyanwụ. N'ebe ahụ ka m hụrụ mmiri gush si n'ebe ndịda (kwupụta Osimiri Nwụrụ Anwụ, m dee.). "Anyị na-agụ ebe a banyere a sọrọ ike (ọ olulu si n'okpuru ọnụ ụzọ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ, na ọ aga si n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ n'akụkụ). Ọ bụ oge ochie 'osimiri' isi iyi 'dị ka a na-eju na elu ọzọ, nri si jebusiten Arọna / Ọnan ochie nnukwu ọrụ ugbo "ebe nzọcha mkpụrụ"?
'Rivers' isi iyi '
Cheta na mgbe New Jerusalem kọwara ná Mkpughe 22: 1-2, ọ bụ ihe ọ bụla na-erughị "osimiri 'isi iyi' n'ebe ahụ ọzọ, na" Tree nke Ndụ ":" Na (na angel) gosi m osimiri nke mmiri nke ndụ, doro anya dị ka crystal, na-aga nke Chineke na nke Nwa Atụrụ ebekpo. Ke n'etiti obodo n'okporo ámá, na abụọ nke osimiri ahụ, bụ osisi nke ndụ. Ọ na-edi mkpụrụ iri na abụọ ugboro kwa ọnwa na-enye mkpụrụ ya, na epupụta na-eweta na-agwọ ndị mba ọzọ. The anọ na isi alaka nke osimiri, site na "isi iyi" na-asọpụta n'Iden na mmiri n'ogige, adịghị gaa ozugbo iji chọpụta n'ihi mgbanwe ndị na-okenye ala. N'oge ahụ, Pishon bụ eleghị anya Nile, Euphrates, nwere ike jikọrọ taa Euphrates, mgbe ahụ Tigris na oké n'ezie onye Tigris. Na Gihon, n'aka, nwere ike n'ezie ike jikọrọ n'Osimiri Jọdan (2 Ihe E Mere 32:30, John 9: 6-7): "Ọ bụ (eze) Hezekiah (6-700 BC, m dee. ) Nke kwụsịrị elu iyi Gihonvattnets ma duru mmiri ala, n'ebe ọdịda anyanwụ obodo nke Devid "ka Ọdọ Mmiri Silom site a 0,5 km ọwara (a ẹnịm e dere n'ime ọwara, nke nwere ike anya taa, na-akọwa otú abụọ grävarlagen zutere gara ọkara). N'oge Aịsaịa 22: 9 na-ekwu, sị: "Ị na-ahụ na obodo Devid, nwere ọtụtụ gbawatụrụ agbawa, na ị na-anakọta mmiri na ala ọdọ mmiri." Ma mmasị na n'ezie nnukwu picture (Gihon na Jesus) bụ ihe anyị na-agụ na Jọn 9: 6 7: "Mgbe o (Jesus) kwuru nke a, ọ ẹtọ na ala, na mere ụrọ nke spittle, e tere mmanụ nwoke ahụ kpuru ìsì n'anya na mgwakota agwa na sị ya: 'gA na asacha na ọdọ mmiri Silom' - ya means'utsänd '. Ya mere, ọ gara ebe ahụ na saa onwe ya, ma mgbe ọ bịara azụ, o nwere ike na-ahụ. " 5 km ogologo ọwara (a ẹnịm e dere n'ime ọwara, nke nwere ike anya taa, na-akọwa otú abụọ grävarlagen zutere gara ọkara). N'oge Aịsaịa 22: 9 na-ekwu, sị: "Ị na-ahụ na obodo Devid, nwere ọtụtụ gbawatụrụ agbawa, na ị na-anakọta mmiri na ala ọdọ mmiri." Ma mmasị na n'ezie nnukwu picture (Gihon na Jesus) bụ ihe anyị na-agụ na Jọn 9: 6 7: "Mgbe o (Jesus) kwuru nke a, ọ ẹtọ na ala, na mere ụrọ nke spittle, e tere mmanụ nwoke ahụ kpuru ìsì n'anya na mgwakota agwa na sị ya: 'gA na asacha na ọdọ mmiri Silom' - ya means'utsänd '. Ya mere, ọ gara ebe ahụ na saa onwe ya, ma mgbe ọ bịara azụ, o nwere ike na-ahụ. " 5 km ogologo ọwara (a ẹnịm e dere n'ime ọwara, nke nwere ike anya taa, na-akọwa otú abụọ grävarlagen zutere gara ọkara). N'oge Aịsaịa 22: 9 na-ekwu, sị: "Ị na-ahụ na obodo Devid, nwere ọtụtụ gbawatụrụ agbawa, na ị na-anakọta mmiri na ala ọdọ mmiri." Ma mmasị na n'ezie nnukwu picture (Gihon na Jesus) bụ ihe anyị na-agụ na Jọn 9: 6 7: "Mgbe o (Jesus) kwuru nke a, ọ ẹtọ na ala, na mere ụrọ nke spittle, e tere mmanụ nwoke ahụ kpuru ìsì n'anya na mgwakota agwa na sị ya: 'gA na asacha na ọdọ mmiri Silom' - ya means'utsänd '. Ya mere, ọ gara ebe ahụ na saa onwe ya, ma mgbe ọ bịara azụ, o nwere ike na-ahụ. " "Na mmasị na n'ezie nnukwu picture (Gihon na Jesus) bụ ihe anyị na-agụ na Jọn 9: 6-7:" Mgbe O (Jesus) kwuru nke a, ọ ẹtọ na ala, na mere ụrọ nke spittle, e tere mmanụ nwoke ahụ kpuru ìsì n'anya na mgwakota na gwara ya: 'gA na asacha na ọdọ mmiri Silom' - ya means'utsänd '. Ya mere, ọ gara ebe ahụ na saa onwe ya, ma mgbe ọ bịara azụ, o nwere ike na-ahụ. " "Na mmasị na n'ezie nnukwu picture (Gihon na Jesus) bụ ihe anyị na-agụ na Jọn 9: 6-7:" Mgbe O (Jesus) kwuru nke a, ọ ẹtọ na ala, na mere ụrọ nke spittle, e tere mmanụ nwoke ahụ kpuru ìsì n'anya na mgwakota na gwara ya: 'gA na asacha na ọdọ mmiri Silom' - ya means'utsänd '. Ya mere, ọ gara ebe ahụ na saa onwe ya, ma mgbe ọ bịara azụ, o nwere ike na-ahụ. "
/ Biko ọmụmụ ihe niile dị Bible maka Jordan (ya mmiri maka iche iche ọ pụtara), na anya ya na ìhè nke taa mgbe ochie ujpptäckter. /
Ma mgbe ahụ, na mbụ ese osimiri ezu na ihe niile anọ n'akụkụ anọ nke Iden, otú ahụ dum ebe ghọrọ n'ụzọ zuru ezu mmiri. M were "isi iyi" na alaka, hụrụ si n'elu, dị ka a akọrọ / cross. Upflow n'etiti, na mgbe ahụ osimiri anọ na-abụghị ntụziaka. A ga-enwekwa ihe ndị mbụ na ike amụma nlereanya Jizọs na Oziọma anọ banyere ya. Matiu, na a akpan akpan na-elekwasị anya na ndị Juu ndị mmadụ nzọpụta. Mark, na pụrụ iche nke nchegharị n'etiti ndị Rom. Luke, nyere revival n'etiti ndị Gris. Na Jọn, iji ihe na-echebekwa okwukwe nke onye ọ bụla na-ama kweere. Ọ ga-ahụ kwuru na ndị - n'agbanyeghị oge tupu Kraịst nzọpụta, akpa ke okwukwe nke ya - nke dị ukwuu iji. Ya mere, ọ ikpochapụ anọgide: "Ke mbuọtidem ke akpa ndị a niile, ebe ha anatagh ihe e kwere ná nkwa. Ma ha hụrụ ya nọ n'ebe dị anya ma nabata na ọ na kwuputa na-bịara abịa na ndị njem ala nsọ na ụwa. "(Ndị Hibru 11:13) Na Christian omenala nke Adam okpokoro isi lie n'okpuru cross nke Calvary, a na-egosi na ndị etoola ọbara Mmiri iyi abụọ si cross n'elu - ala na n'ili nke ụlọ na ala "okpokoro isi", nke ahụ na-anọchi anya ndị niile nwụrụ n'okwukwe, na-eche ya, nke ga-emeri na agwọ na kpuchie mmehie.
Mee elu mee bụrụ abụ ọtụtụ n'etiti ndị mmadụ nke okwukwe dị ka nke a banyere Jizọs: "M na-ahụ na Okwu ya mara mma image ..." (Victory toner 567 v 2). Na otu onye nke mbụ amụma atụ on / anya / on Jesus - mara mma otu - bụ na-amụ mmiri aga n'ime Ogige Ubi nke Iden. Jesus bụ ihe dị nsọ isi iyi nke ndụ, ọ bụ n'obe eziokwu na Calvary, eru elu na nke a "okwukwe isi iyi" na-anọ "ogwe aka" - nke n'aka nke na-aghọ nta iyi / iyi, na onye ọ bụla na-anata Jesus ná ndụ ya . Na nzukọ ya na nwaanyị Sameria, Jizọs kwuru, (John 4:14): "The mmiri m na-enye ga-adị a mmiri na ya na mmiri nāsuputa ri nne ndụ ebighị ebi." O nwere otu oge na a mmemme nke ụlọikwu, Jesus ada ofiori (John 7 : 38-39b): " 'ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ mmiri na-agụ, bịakwute m na ihe ọṅụṅụ! Onye kwere m, dị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru, si ya n'afọ ga-asọpụta nke miri di ndu. 'Nke a ọ sịrị nke Mmụọ, nke ha ga-enweta ndị kweere na ya. "Mgbe Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya na" mmiri dị ndụ "n'ime, na upwelling iyi itu ukwu na zuru eruba - o kwupụtara na ha ga-aga na nke a nile ụwa, n'akụkụ niile na n'ọnụ (Matthew 28: 18-20, Ọrụ 1: 8). Ọ dịghị ebe o weere oké ruru, ọ dịghị ndị mmadụ ụdị agaghị ekwe omume nye ndị gospel na - n'ihi na "Chineke bụ na Christ neme ka (dum) ụwa ka onwe ya." (2 Ndị Kọrint 5:19)
Olu Nke a Cross nke Calvary anọ. Site n'aka Jizọs, na center gua, ahụ na-aga ozi si bụla ntụziaka: n'ebe ọwụwa anyanwụ, n'ebe ọdịda anyanwụ, n'ebe ndịda na n'ebe ugwu. Na amụma atụ / foto: on, ma na Jizọs na Bible akụkọ nke ukwuu "ogbe ndịda osimiri" na nta alaka. Anyị nwere ike ọbụna na-egosi onye ọ bụla ọzọ na ihe ahụ mere mgbe Jizọs nwụrụ n'obe, na na mgbe ahụ na echiche nke "sọrọ ike" dị ka Ezekiel 47. Lee John 19: 33-34: "Ma mgbe (ndị agha) bịakwutere Jizọs hụrụ na ọ nwụọla, ha akụjisịghị ya ụkwụ. Kama n'ịnọgide otu n'ime ndị agha ya ube n'akụkụ (obliquely elu na see obi, center nke Jesus), na Ngwa ngwa bịara e ọbara na mmiri. "
Back to n'ọdịnihu amụma, Ezikiel 47 v 8-9: "Mgbe ahụ kwuru na ya (nke angel) na me'Detta mmiri aga n'ebe ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ na-asọdata n'elu desert, wee si nke (nwụrụ anwụ) oké osimiri. The mmiri mebiri site eru ka (nwụrụ anwụ), oké osimiri, na mmiri na-aghọ ike. N'ebe nile ebe osimiri ga-amaliteghachi ọ bụla dị ndụ nke na Nkea na shoals. Azụ bụ n'ebe dị nnọọ ọtụtụ, n'ihi na mgbe mmiri a na-akawanye n'ebe ahụ, mmiri na-ike, na ihe nile na-abịa ndụ ebe iyi na-agba ya. "Oké Osimiri Nwụrụ bụ a Bible picture nke ndi mmadu. Mgbe anyị kwere ka Jesus oké ọnụ ekpuchi mmehie ji baa ọbara na vattendopets n'ime ọcha usoro, na-arụ ọrụ n'ime anyị site na Mọ Nsọ, mgbe ahụ anyị na Bible azọpụta, zọpụta, nsọ, na ahụ ike. Anyị na-adị ndị na-ebu nke ndụ eluigwe. In "väckelsemötenas" songs n'ihu, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ndị "isi iyi nke okwukwe" na gbaara ọsọ na obe nke Calvary, Dị ka ihe atụ (lee Victory toner): "Lee ihe na-enye aga, gọzie ya ọ chọtara! Ọ bụ miri emi ma doro anya, na-ezo ma doro anya. "(246) -" Chineke jupụtara na mmiri na ọtụtụ agụụ na-agụ ndị inyom na ndị ikom. A isi iyi nke mmiri ndụ na-eju dị ka agbọ n'elu. "(383) -" A ebube, ebube isi iyi bụ isi iyi nke Jesus 'ọnyá. Ọ ọcha niile mmehie, dị ka na-acha ọcha dị ka snow na m asa ihe. "(524)
The Bible na-esetịpụ ọnụ
Ka anyị ghara ịpụ na eziokwu. The Bible-enyere anyị aka ịnọgide na-ozi nke nzọpụta. Ugbu a ọ bụ dị ka m kwuru oge na-eche echiche, na abụghị oge bụghị ikesiike obi abụọ. Ọ bụrụ na anyị na-anyị oké miri - Bible / amụma - echiche (mgbe ụfọdụ zoro onwe onye na ebe aha, ngwa mgbanwe na ọmụmụ ihe, wdg), na ọnọdụ ndị ukwuu na anyị nwere ike iguzogide ndị iro ahụ tọrọ afia gwuo olulu, set tripwires. Ee, na nso nke ọnwụnwa. Ka Mmụọ Nsọ ga-akpọlite ​​n'elu efu nke ekweghi-ekwe! The Bible ziri ezi! The amụma-emezu! Jesus bụ mgbe azịza!
Ọ na-akpali iche na-agụ banyere Mary Magdalene (John 20: 11-18), banyere ya na-ezute na bilitere Jesus n'ime Ogige Ubi / ubi n'èzí ili. - otú na mbụ ọ na-aghọta, ma ya mwute chere na ọ bụ gị n'ụlọnga ubi, "Jizọs sịrị ya, 'Kvinna, gịnị mere i ji na-eti mkpu? Ònye ka ị na-achọ? "O chere na ọ bụ ndị na-elekọta ubi na sị ya: 'Herre, ma ọ bụrụ na ị na-ebu ya, gwa ebe ị dọbara ya, m ga-honom.' Jizọs sịrị her'Maria .'Then ọ tụgharịa si ya n'asụsụ Hibru: 'Rabbuni!' - nke pụtara onye nkụzi. Jizọs wee sị ya, 'Rör m, n'ihi na m na-rịgooro Nna ma. Ma gaa ụmụnna m, sị ha, Ana m arịgokwuru Nna m na Nna unu, na Chineke m na Chineke unu.
The US gospel, na music dere, Miles C. Austin (1868-1946), dere 1912 revival song: "Ke ubi" / "Na Garden". O mere nke a ma si Meri Magdalin zutere na bilitere Jesus n'èzí ili, ma Miles onwe ya wee ahụmahụ otú o maka mgbe na ya bu onye zutere "ubi" - na ọ bụ ihe nke a "laghachi ' ogige ubi nke Iden Chineke ọkpụkpọ olu. Na na mgbakwunye na nke song pụtara na ọtụtụ ndị na-enye ndụ ha na-Jesus mgbe ha nụrụ na ọ ẹkwọ, n'ihi ya, ọ bịara na-na-eji dị dopsång. Naanị na i tinye "ubi" na e, na-ebili otu n'ime baptizim mmiri / "osimiri" na-esote - nso na onye ntughari ka Jesus. Rivers na isi iyi nke okwukwe na otu.
Ebe a gospel sụgharịa Swedish site HH 1925:
M bịara ya ubi nke uzo, mgbe igirigi ka na ifuru. Na olu m na-anụ, na-eme ka m nwee obi ụtọ, ị ga-esi m now.
Onye na-egbu egwuregwu. Na m na-anụ olu ya m ara, na ọ na-ekwu na m na ya. Mwute na nchegbu na-agbanahụ maka a ọhụrụ ọṅụ, ndị dị ka nke nke mgbe adị.
Ọ na-akpọ nzukọ ka nwayọọ, nke mere na anụ ufe na-akwụsị ịbụ abụ. N'ihi na abụ olu ụtọ, na ịhụnanya nke Chineke, gbaara ihe niile echiche arọ.
N'ogige, na-m na-achọ, ma e nwere n'èzí ákwá m nsogbu. Na ọ na-ajụ m na-aga, na dara obere, n'ihi na ha, o wee na-egbu ha.